နောဧ၏သင်္ဘောအကျဉ်းချုပ် | Noah's Ark | Real Conversion
၂၀၁၄ခုနှစ်၊ ဇွန်လ (၁ )ရက်နေနံနက်ပိုင်းတွင် လော့(စ်)အိန်ဂျယ်လ်ရှိ Baptist Tabernacle ၌
Dr. R. L. Hymers., Jr. ၏ တရားဒေသနာဖြစ်သည်။
ဂေါဖရသစ်သားဖြင့်၊ သင်္ဘောကို ကိုယ်ဘို့တည်လုပ်လော့။ အထဲ၌လည်းအခန်းများ ကိုလုပ်လော။ အတွင်း၊ပြင်၊ပတ်လည်ကို ထင်းရှူးစေးနှင့်သုတ်လော့။ (ကမ္ဘာ ၆း ၁၄)
လွန်ခဲ့သောရက်သတ္တပတ်က ဟောလီးဝုဒ်က “နောဧ” ဟုခေါ်သောရုပ်ရှင်ကားကို ပြသခဲ့သည်။ ထိုရုပ်ရှင်ကို သန်းပေါင်းများစွာသော လူငယ်လူရွယ်များကြည့်ရှုခဲ့ၾ႕ကသည်။ ကျွန်ုပ်က “နောဧရုပ်ရှင်ဇာတ်ကား သည် စာတန်၏လုပ်ရပ်ဖြစ်သည်”(ဖတ်ရှုနိူင်ရန် ဤနေရာတွင်နှိပ်ပါ) ဟု ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်ကိုရေးသားခဲ့သည်။ ရုပ်ရှင်တွင် စာတန်း၏အတွေးအမြင်များစွာပါရှိသောကြောင့် ကျွန်ုပ်သည် အဘယ်သူထံတွင်မျှ အတည်ပြုပြော ကြားခြင်းမရှိပါ။ ထိုအပြင် ရုပ်ရှင်တွင် မှန်ကန်သောအချက်အလက်များလည်းပါဝင်ပေသည်။ ၎င်းသည် ရေလွှမ်းမိုးခြင်းကို ပုံဆောင်ပြီး သင်္ဘော၏ယုံနိူင်ဖွယ်ရာအချက်အလက်များကို တင်ပြထားပေသည်။ ယနေ့ထိ တိုင်လူတို့၏စိတ်ထဲတွင်ရှိနေသောအရာမှာ သင်္ဘောသည် ပျော်ရွှင်သောတိရိစ္ဆာန်များနှင့် ပြတင်းပေါက်ကို ငေးမောကြည့်ရင်းပီတိဖြစ်သော နောဧတို့ရှိသည့်သေးငယ်သော လှေငယ်ဟုသာ ထင်မှတ်နေကြသည်။ ၎င်းမှာ ကလေးများအတွက် Sunday School စာအုပ်တွင် တွေ့ရှိရသော ကာတွန်းသာဖြစ်သည်။ ကလေးများ၏ စာအုပ်ထဲရှိထိုကာတွန်းသည် ရုပ်ရှင်ကဲ့သို့ပင် စာတန်၏လုပ်ဆောင်မှုပင်ဖြစ်သည်။ သူတို့သည် သင်္ဘောနှင့် ရေလွှမ်းမိုးခြင်းတို့၏မှားယွင်းသောရှုထောင့်ကိုသာပေးထားသည်။ တရားဟောသူများက သူတို့၏လူငယ်လူရွယ် များအား ၎င်းသည် စာတန်၏လုပ်ရပ်ဖြစ်ကြောင်း ပြောပြမည်ဟုထင်မိပါသည်။ ထိုအပြင် အသင်းတော် တရား ဟောသူများအနေဖြင့် သင်တို့၏ ဆန်းဒေးစကူးကျောင်းကိုသွားပြီး နောဧနှင့် ရေလွှမ်းမိုးခြင်းကာတွန်းများကို လွင့်ပစ်ရမည်။ အားလုံးကို လွှင့်ပစ်လိုက်ပါ။ သူတို့သည် ထိုကာတွန်းရှိ အရေးပါသောသတင်းစကားများဆီသို့ လှည့်ပြန်ကြသည်။ ယင်းသည်ပင် စာတန်၏လုပ်ဆောင်မှုဖြစ်သည်။ သင်္ဘောနှင့် ရေလွှမ်းမိုးခြင်းတို့သည် ရယ်ရွှင်စရာဟာသများမဟုတ်ကြပေ။
ယခုတွင် ကျွန်ုပ်သည် နောဧ နှင့် သင်္ဘောအကြောင်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ တရားဒေသနာများစွာ ဟောကြားခဲ့ သည်။ ယခုညနေတွင် သို့ရာတွင် နောဧသည် ကျေးဇူးတော်ကို ခံစားရသည် (ဖတ်ရှုနိုင်ရန် ဤနေရာတွင်နှိပ်ပါ) ဟူသောခေါင်းစဉ်ဖြင့် ဟောကြားပါမည်။ သို့ရာတွင် ဤမနက်ပိုင်းတွင်မူ သင်္ဘောအကြောင်းကိုသာဟောကြား မည်။ နောဧသင်္ဘောသည် ပုံဆောင်ချက်ဖြစ်သည်၊ ဓမ္မသစ်ကျမ်းတွင်ဖြစ်ပျက်လာမည့်အကြောင်းအရာတစ်ခုအ တွက် အမှတ်လက္ခဏာဖြစ်ကြောင်း မေးမြန်းနေစရာမရှိပေ။ မဿဲ ၂၄း ၃၇-၃၉ တွင် ခရစ်တော်က နောဧအ သက်ရှင်သောနေ့ရက်ကာလသည် ခရစ်တော်ကြွလာတော်မမူမီ နေ့ရက်ကာလကို ပုံဆောင်ထားခြင်းဖြစ်သည်။ ၂ ပေ ၂း ၅ အရ နောဧသည် မှားယွင်းသောအယူဝါဒနှင့် သွန်သင်မှုများကြားတွင် အသက်ရှင်နေရသော ဖြောင့် မတ်သောတရားဟောသူများကို ပုံဆောင်ထားပေသည်။ ၁ ပေ ၃း ၂၀-၂၁ အရ သင်္ဘောသည် ခရစ်တော်အား ဖြင့်ရရှိသောကယ်တင်ခြင်းကိုပုံဆောင်ပေသည်။ ဟေဗြဲ ၁၁း ၇အရ သင်္ဘောသည် ကယ်တင်ခြင်းကိုပုံဆောင် ထားကြောင်းထပ်မံဖော်ပြထားပါသည်။ နောဧလက်ထက်တွင်ရှိသောလူများမှာ ပုံဆောင်ချက်သာဖြစ်သည်။ နောက်ဆုံးသောကာလတွင်ရှိကြသော ကယ်တင်ခြင်းမရရှိသူများသည် ၎င်းပုံဆောင်ချက်ကို ပြည့်စုံစေသောသူ များဖြစ်ကြသည်။ မှားယွင်းသောအချိန်ကာလက နောဧ၏တရားဟောချက်သည် ပုံဆောင်ချက်ပင်ဖြစ်သည်။ နောက်ဆုံးသောကာလရှိသစ္စာရှိသောတရားဟောသူများသည် မကောင်းမှုကို ဆန့်ကျင်သူများ၊ ပုံဆောင်ချက်၏ စုံလင်ခြင်းပင်ဖြစ်ပေသည်။ သင်္ဘောသည် ပုံဆောင်ချက်ပင်ဖြစ်သည်။ ခရစ်တော်၌ရှိသောကယ်တင်ခြင်းသည် ပုံဆောင်ချက်၏ပြည့်စုံချက်ဖြစ်ပေသည်။ ပုံဆောင်ချက်များကို တရားဟောဆရာအားလုံးက အရာအားလုံးကို ဓမ္မဟောင်းကျမ်းရှိ ပုံဆောင်ချက်အဖြစ်တွေ့မြင်ရာ ကနဦးခရစ်ယာန်ဘာသာတွင် မှားယွင်းစွာအသုံးပြုကြ ကြောင်း ကျွန်ုပ်သိသည်။ သို့ရာတွင် ဓမ္မသစ်ကျမ်းတွင် ပုံဆောင်ချက်များပြည့်စုံလာရာ ဓမ္မဟောင်းကျမ်းတွင် စစ်မှန်သောပုံဆောင်ချက်များရှိကြောင်းကို ကျွန်ုပ်သိရှိပေသည်။ သာဓကအဖြင့်ဆိုရလျှင် ဟေဗြဲကျမ်းစာသည် ပုံဆောင်ချက်များဖြင့် ပြည့်နှက်နေသည်။ ယေရှုသည် သေခြင်းမှ ရှင်ပြန်ထမြောက်ပြီးနောက်တွင် သူသည် ၎င်း၏နောက်လိုက်နှစ်ပါးနှင့်အတူထိုင်တော်မူသည်။
“ထိုအခါ မောရှေ၏ကျမ်းမှစ၍ ပရောဖက်တို့၏ကျမ်းစာများ၌ကိုယ်တော်ကိုရည်မှတ်၍ ရေးထားသမျှသောကျမ်းစာချက်အနက်ကို ရှင်းလင်းစွာဖော်ပြတော်မူသည်။” (လုကာ ၂၄း ၂၇)
နောဧ၏သင်္ဘောသည် လောကကိုကယ်ချွတ်မည့်သူအဖြစ် မိမိကိုယ်ကို ပုံဆောင်ထားကြောင်းခရစ်တော်၏ မိန့်တော်မူချက်ဟူသမျှကို ကျွန်ုပ်ယုံကြည်ပါသည်။ သင်္ဘောသည် ဘုရားသခင်၏လူများအား ရေလွှမ်းမိုးခြင်းမှ ကယ်နှုတ်တော်မူသကဲ့သို့ ခရစ်တော်သည်လည် ဘုရာသခင်၏လူများကို တရားစီရင်ခြင်းနှင့် အပြစ်ငရဲမှ ကယ်နှုတ်ခဲ့သည်။ သမ္မာကျမ်းစာကိုငြင်းပယ်သောသူများဖြစ်ကြသည် Harry Emerson Fosdick ကဲ့သို့သူများသည် ထိုအရာကို ငြင်းပယ်ခဲ့ကြသည်။ ထို့အပြင် Fuller Theological Seminary သို့မဟုတ် Chicago Divinity School တို့လည်းကို ၎င်းကို ငြင်းပယ်ခဲ့ကြသည်။ သမ္မာကျမ်းစာက “နောက်ဆုံးသောကာလ၌ပြက်ယာယ်ပြု တတ်သောသူတို့သည်၊ မိမိတပ်မက်ခြင်းအတိုင်းကျင့်နေ၍”ဆိုသောအချိန်တွင် ထိုသို့တူညီသောလူတို့အ ကြောင်းကိုကြိုတင်သတိပေးဟောကြားခဲ့ပါသည်။
“ချစ်သူတို့၊ နောက်ဆုံးသောကာလ၌၊ မိမိတို့မတရားသောတပ်မက်ခြင်းအတိုင်းကျင့် နေ၍၊ ပြက်ယယ်ပြုတတ်သောသူတို့သည်ပေါ်လာကြလိမ့်မည်ဟု ငါတို့သခင်ယေရှု ခရစ်၏တမန်တော်တို့သည်ဟောပြောနှင့်သောစကားများကို အောက်မေ့ကြလော့။ ထိုသူတို့သည် သင်းခွဲသောသူ၊ ဝိညာဉ်တော်နှင့်ကင်းသောဇာတိပကတိလူဖြစ်ကြ သည်။” (တရားသူကြီး ၁၇-၁၉ )
ထိုသို့သောမယုံကြည်သောသူတို့၏သွန်သင်ခြင်းကို ဆန့်ကျင်ငြင်းဆန်ရန် လွန်ခဲ့သောနှစ်များက သင့်ယူခဲ့ သည်။
ထို့ကြောင့်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် ကျွန်ုပ်တို့၏အခြေပြုကျမ်းဖြစ်သည့် ကမ္ဘာဦးကျမ်း ၆း ၁၄ ဆီသို့ပြန်လှည့်ပြီး သင်္ဘော၏ဖော်ပြချက်တစ်ခုနှင့် ၎င်းသည် ကျွန်ုပ်တို့၏ကယ်တင်ရှင်နှင့်သခင်အဖြစ်မည်သို့ပုံဆောင်ထားသည် ကိုလေ့လာကြပါစို့။ဘုရားသခင်က နောဧအားမိန့်တော်မူသည်မှာ ဤသို့ပင်ဖြစ်သည်။
ဤနေရာတွင် သင်၏သမ္မာကျမ်းစာအုပ်ကို ဆက်လက်ဖွင့်ထားပါ။ အာမင်…..။
Arthur W. Pink ၏ပြောဆိုချက်မှာ “ဘုရားသခင်၏အမျက်တော်မုန်တိုင်းဒဏ်မှာ လွတ်မြောက်ရန် နောဧနှင့်သူ၏မိသားစုများခိုလှုံစရာတွေ့ရှိသောသင်္ဘောမှာ သမ္မာကျမ်းစာအားလုံးတွင်တွေ့ရှိနိုင်သည့် ခရစ် တော်၌ရှိသော ရှင်းလင်းပြီး နားလည်သဘောပေါက်နိူင်သည့် ယုံကြည်သူ၏ကယ်တင်ခြင်းပုံဆောင်ချက်တစ်ခု ပင်ဖြစ်သည်။” (Arthur W. Pink, Gleanings in Genesis, Moody Press, ၁၉၈၉၊ စာ-၁၀၃ ) ထို့အပြင် ၁၈ ရာစုက ကျွန်ုပ်တို့နှစ်ခြင်း အဘိဒန်ရေးသူ Dr. John Gill ကလည်း သင်္ဘောမှာ ခရစ်တော်ကို ပုံဆောင်ထားသည်ဟု ထပ်ခါထပ်ခါဆိုထားပါသည်။ ( John Gill, D.D., An Exposition of the Old Testament, The Baptist Standard Bearer, ၁၉၈၉၊ အတွဲ ၁၊ စာ- ၅၀-၅၁ )
၁။ ပထမအချက်- သင်္ဘောကို ဘုရားသခင်ကြံစည်တော်မူခဲ့သည်။
နောဧသည် စီရင်ခြင်းအမှုသက်ရောက်လာမည့်အကြောင်းကို သတိပြုမိခဲ့သည်။ သို့ရာတွင် ဘုရားသ ခင်သည် သူ့အားဖော်ပြတော်မူသည်အထိ သင်္ဘောတစ်ခုတည်ဆောက်ရန်အကြံအစည်မရှိခဲ့ပါ။
သို့သော် ဘုရားသခင်က သူသည် အဘယ်အရာကိုလုပ်ဆောင်ရမည်ကို သိတော်မူခဲ့သည်။ နောဧနှင့် သူ၏အပေါင်းအဖော်မိသားစုများသည် ကမ္ဘာမတည်မရှိမီကတည်းက ရွေးကောက်ထားသောသူများဖြစ်ကြောင်း ကို သင်တို့သိရှိပေလိမ့်မည်။ တမန်တော်ရှင်ပေါလုက “ကမ္ဘာမတည်မရှိမှီငါတို့ကို ခရစ်တော်၌ရွေးကောက်တော် မူသည်”( ဧဖက် ၁း ၄ )ဟု ဆိုထားပါသည်။ ဘုရားသခင်သည် သင်္ဘောအားဖြင့်ဘေးလွတ်မည့် သူများကိုသာ ရွေးကောက်ထားသည်မဟုတ်၊ ကျွန်ုပ်တို့ကို အပြစ်မှ ကယ်ချွတ်မည့်ခရစ်တော်ကိုစေလွှတ်တော်မူရန်လည်း ကမ္ဘာမတည်မရှိမှီကတည်းက ကြံစည်စိတ်ကူးတော်မူခဲ့သည်။ သို့ဖြစ်၍ သမ္မာကျမ်းစာက ခရစ်တော်အား “ကမ္ဘာဦးကတည်းက ကွပ်မျက်ခြင်းခံရသော ဘုရားသခင်၏သိုးသူငယ်”(ဗျာ ၁၃း ၈ ) ဟုဆိုထားသည်။
ဘုရားသခင်သည် ကျွန်ုပ်တို့ကို ကယ်တင်ရန်ခရစ်တော်ကိုစေလွှတ်တော်မူမည်ဖြစ်၍ ပုံဆောင်ချက်ဖြစ် သောသင်္ဘောကို တည်ဆောက်ရန်ကြံစည်စိတ်ကူးခဲ့သည်။ ဘုရားသခင်သည် နောဧအားကယ်တင်ရန် ရှေးမဆွက ကြံစည်ခဲ့သည်။
ဘုရားသခင်ကို မသိသောသူများကိုဖျက်ဆီးရန်အတွက် ရေလွှမ်းမိုးခြင်းကိုစေလွှတ်တော်မမူမီကတည်း က သင်္ဘောအားဖြင့်နောဧတို့မိသားစုကိုကယ်တင်ရန် ကြိုတင်စီမံထားသကဲ့သို့ ခရစ်တော်အားဖြင့် ကယ်တင်တော်မူရန် ရှေးမဆွက ဘုရားသခင်ကြံစည်တော်မူသည်ဖြစ်၍ ခရစ်ယာန်အရောက်စီတိုင်းဝမ်းမြောက် သင့်ပေသည်။ သင်သည် ခရစ်တော်၌ရှိလျှင် တရားစီရင်ခြင်းမုန်တိုင်းကို လွန်မြောက်ပေလိမ့်မည်။
( ချားလ်ဝယ်စလီသီကုံးထားသည့် “ကျွန်ုပ်ဝိညာဉ်ကိုချစ်သောယေရှု” ၁၇၀၇-၁၇၈၈)
၂။ သင်္ဘေသည် အထဲ၌ရှိသောသူများကိုသာ ကယ်တင်ရန်တည်ဆောက်ထားသည်။
၎င်းသည် လှေသက်သက်မဟုတ်ပါ။ လုံးဝမဟုတ်ပါ။ ဟေဗြဲဘာသာစကားတွင် “သင်္ဘော”ဟူ သောစကားလုံးမှာ “taybaw”ဖြစ်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာ “ကြီးမားခိုင်မာသည့် သေတ္တာ” ဖြစ်သည်။ ယင်းမှာ မောရှေလေးကို နိူင်မြစ်ထဲသို့ပစ်ချသည့်အချိန်ကအသုံးပြုသော သေတ္တာ၏ဆိုလိုရင်းနှင့်ထပ် တူဖြစ်သည်။ တူညီသောဟေဗြဲစကားလုံးကိုကမ္ဘာဦး ၅၀း ၂၆ က “အခေါင်း” ဟုဘာသာပြန်ဆိုထား သည်။ ၎င်းတွင် တက်မ မရှိပါ။ ရွက်လည်းမရှိပါ။ စွမ်းဆောင်နိုင်မှုကို အနည်းဆုံးပေးနိုင်သည့် အောက်ခြေပြားဖြစ်မည်ဟု ကျွန်ုပ်ယုံကြည်မိသည်။ သေတ္တာကဲ့သို့ပင်ဖြစ်သည်။ ဘုရားသခင်က “သေတ္တာတစ်လုံးကို ငါ့အဖို့လုပ်၍ အတွင်းအပြင်ကို ကတ္တရာဖြင့်လောင်းရန်မိန့်ထားသည်။” “ကတ္တရာ”ဟူသောစကားလုံးမှာ “kopher”ဟူသောစကားလုံးမှ ဘာသာပြန်ဆိုခြင်းဖြစ်ပြီး “kaphar” ၏ကြိယာပုံစံပင်ဖြစ်သည်။ ၎င်းမှာ ဓမ္မဟောင်းကျမ်း၏ နေရာပေါင်း ၇၀ လောက်တွင် “ရန်ုငြိမ်းခြင်း”ဟု ဘာသာပြန်ဆိုထားသောစကားလုံးဖြစ်သည်။ ယင်းမှာ ဝတ်ပြုရာကျမ်း ၁၇း ၁၁ တွင် “လူ၏အပြစ်ကိုဖြေသောအရာကား၊ အသွေးဖြစ်ပေသတည်း” ဟု ဆိုရသည့်အကြောင်းပေတည်။ ယင်းနှစ်ခုစလုံးသည် တူညီသောဟေဗြဲစကားလုံးများဖြစ်ပြီး ကျွန်ုပ်တို့သည် ကမ္ဘာဦး ၆း ၁၄ ကို “ဂေါဖရသစ်သားဖြင့်၊ သင်္ဘောကို ကိုယ်ဘို့တည်လုပ်၍အတွင်းအပြင်ကို အသွေးဖြင့်သုတ်လိမ်းပါ”ဟူ၍ အဓိပ္ပါယ်ပို၍ပေါ်လွင်အောင်ဆိုနိူင်ပေသည်။ သို့သောကြောင့် သင်သည် ဤမျှလောက်ကြီးမားပြီး ကတ္တရာစေးဖြင့်သုတ်လိမ်းသော သေတ္တာကိုပိုင်ဆိုင်ထားသည်။ Dr. Henry M. Morris က “kaphar ဟူသောစကားလုံးသည် နောက်ပိုင်းတွင် ‘ရန်ငြိမ်းခြင်း’ဟူ၍မကြာခဏ ဘာသာပြန်ဆိုကြသည်။ ရေလွှမ်းမိုးခြင်း ပြစ်ဒဏ်ကို ရင်ဆိုနိူင်ခြင်းတွင် ၎င်းသည် ခရစ်တော်၏လှပသောပုံဆောင်မှုဖြစ်လာပေသည်။” ( Dr. Henry M. Morris ၏ The New Defender’s Study Bible, လောကပုံနှိပ်တိုက်၊ ၂၀၀၆၊ စာ-၃၄၊ ကမ္ဘာဦးကျမ်း ၆း ၁၄ နှင့်ပါတ်၍ မှတ်စု )
ထို့ကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် သင်္ဘောကိုပိုင်ဆိုင်ထားကြသည်။ ၎င်းမှာ အတွင်း၊ အပြင်တွင် ကတ္တရာ မည်းဖြင့် သုတ်လိမ်းထားသော သစ်သားဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည့် သင်္ဘောဖြစ်သည်။ သို့မှသာ ကြီးမားသည့်ရေလွှမ်းမိုးခြင်းကို အံတုအနိူင်ယူမည်ဖြစ်သည်။ Dr. M. R. DeHaan က ဤသို့ဆိုထားသည်။
သင်္ဘောသည် တလားကြီးနှင့်တူပေသည်။ တကယ်တော့ “သင်္ဘော”ဟူသောစကား လုံးကို ကမ္ဘာဦး ၅၀း ၂၆ တွင် “တလား”ဟူ၍ပြန်ဆိုထားပေသည်။ သင်္ဘောသည် ကျွန်ုပ်တို့သခင်ယေရှုခရစ်၏အသေခံခြင်းကိုပုံဆောင်ထားပေသည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည် နောဧခေတ်တွင်ရှိကြကုန်သောလူများအဘယ်မျှလောက် ဆိုးသွင်းကြသည်ကို ခန့်မှန်းသိရှိနိူင်ပေသည်။ ထိုခေတ်ထိုအခါက မိုးရွာဖူးခြင်းမရှိ သည်ဖြစ်၍ တလားကြီးနှင့်တူသော သင်္ဘောကိုတည်ဆောက်ပြီး မိုးကြီးမည်ဟု ကြိုတင်ဟောကြားခြင်းသည် လှောင်ပြောင်ပျက်ရယ်ပြုခြင်းဟု သူတို့ထင်မှတ်ကြ သည်။ (M. R. DeHaan, M. D., နောဧခေတ်ကာလ၊ Zondervan ပုံနှိပ်တိုက်၊ ၁၉၇၁၊ စာ-၁၇၃ )
ယနေ့ခေတ်တွင် လူများစွာတို့သည် သမ္မာကျမ်းစာကို လှောင်ပြောင်ပျက်ရယ်ပြုကြသည်။ လူများစွာတို့က ဤရေလွှမ်းမိုးခြင်းရေတွက်မှုကို ပျက်ရယ်ပြုမှုသဖွယ်လှောင်ပြောင်ကြသည်။ သို့ရာတွင် ဘုရားသခင်၏တရားစီရင်ခြင်းအမှုကျရောက်လာသည့်အချိန်တွင် သူတို့သည် အဘယ်အရာကို လုပ်ဆောင်ကြ မည်နည်း။ ခရစ်တော်၌လုံခြုံစိတ်ချမှုမရှိခဲ့လျှင် သင်မည်သည့်အရာကို လုပ်ဆောင်မည်နည်။
၃။ တတိယအချက်- သင်္ဘောမှာ ဘုရာသခင်၏အမျက်တော်ကိုအကာအကွယ်ပေးသည်။
သင်္ဘောသည် အကာအကွယ်ပေးသောနေရာဖြစ်ပေသည်။ တကယ်တော့ တစ်ခုတည်းသော လုံခြုံသည့်နေရာဖြစ်သည်။ ဘုရားသခင်၏အမျက်တော်ကို ကာကွယ်ပေးသော တစ်ခုတည်းသောနေ ရာဖြစ်သည်။
ဤလောကရှိလူများစွာတို့က ဘုရားသခင်ထံမှ ငြိမ်သက်ခြင်းကို ရှာဖွေတွေ့ရှိရန် “နည်းလမ်း များစွာ”ရှိသည်ဟုဆိုကြသည်။ ယင်းမှာ မှားယွင်းသော စိတ်ကူးယဉ်ဖြစ်သည်။ ဘုရားသခင်သည် နောဧခေတ်တွင် အမျက်တော်မှ လွတ်မြောက်ရန်နည်းလမ်းတစ်ခုတည်းသာပေးထားပြီး ၎င်းမှာ သင်္ဘောဆီသို့လာခြင်းပင်ဖြစ်သည်။ ယနေ့ကာလ ၌ သူ၏အမျက်တော်မှလွတ်မြောက်ရန်ဘုရားသခင်ပေး ထားသည့်တစ်ခုတည်းသောလမ်းမှာ သခင်ယေရှုခရစ်ပင်ဖြစ်သည်။ သမ္မာကျမ်းစာက ဤသို့ဆိုထားသည်။
“ထိုသခင်၏နာမမှတပါး ငါတို့ကို ကယ်တင်နိုင်သောနာမ တစုံတခုမျှ ကောင်းကင် အောက်လူတို့တွင် မပေါ်မရှိ”။( တမန်တော် ၄း၁၂ )
လူများစွာတို့က “၎င်းမှာမျှတသောအရမဟုတ်” ဟုဆိုကြသည်။ ထိုစကားမည်သို့ဆိုကြသည်ကို ကျွန်ုပ်နားမလည်နိူင်ပါ။ ယင်းမှာ ကျွန်ုပ်အတွက်မူ အလွန်ပင်မျှတမှုရှိသည်။ လူသားသည် ဥယျာဉ်တော်ထဲတွင် ပြစ်မှားခဲ့ကြသည်။ လူသားတို့သည် ရေလွှမ်းမိုးခြင်းမတိုင်မှီတွင်လည်း အပြစ်ကိုတဖန်ကျူးလွန်ကြပြန်သည်။ ဘုရားသခင်က သူတို့အပြစ်အတွက်ဒဏ်မှလွတ်မြောက်ရန်နည်းလမ်းကို ခင်းပေးခဲ့သည်။ သို့ရာတွင် ကယ်လွှတ်ခြင်းရရှိမည့်လမ်းကို လူတို့ငြင်းပယ်ခဲ့ကြသည်။ သို့ဖြစ်၍ ရေလွှမ်းမိုးခြင်းတွင် အားလုံးနစ်မြှုပ်ခဲ့ကြ သည်။ ၎င်းတွင် မမျှတသောအရာကားအဘယ်နည်း။ ကျွန်ုပ်ရှာမတွေ့နိူင်ပါ။ မရှိသကဲ့သို့ နောင်လည်းရှိလာ မည်မဟုတ်။ နောဧလက်ထက်ရှိလူများသည် ဧနောက်ခေတ်ကတရားဟောချက်ကိုကြားနာခဲ့ကြသည်။ (ယုဒ ၁၄၊ ၁၅ )သူတို့သည် နောဧ၏တရားဟောချက်ကိုလည်း ကြားကြသည်။ ( ၂ ပေ ၂း ၅ )သူတို့သည် သူတို့နှင့်အစဉ်မဆုံးသောသန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ရှိကြသည်။ (ကမ္ဘာဦး ၆း ၃ )ထို့ကြောင့် သူတို့တွင် အကြောင်းပြချက်လုံးဝမရှိ။ ထို့အပြင် ဒီမနက်သင်တို့အားကျွန်ုပ်မေးသောမေးခွန်းမှာ “သင်သည် သခင်ယေရှု၏ ကယ်တင်ခြင်းကို ရရှိတော်မမူပြီး အသက်ဆုံးရှုံးခဲ့လျှင် သင်၏အကြောင်းပြချက်မှာ အဘယ်နည်း” ဟူ၍ဖြစ်သည်။ ကောင်းမွန်သောမေးခွန်းတစ်ခုပင်ဖြစ်သည်။ ဘုရားသခင်သည် ဤလောကကို တရားစီရင်သောအချိန်တွင် ခရစ်တော် ၌လုံခြုံစိတ်ချမှုမရှိခဲ့လျှင် သင်၏အကြောင်းပြချက်မှာ အဘယ်အရာဖြစ် မည်နည်း။
၄။ စတုတ္ထအချက်- သင်္ဘောထဲတွင် အားလုံးအတွက်အခန်းများရှိသည်။
ဟေဗြဲများတို့တွင် ၁၇.၅ပေ၏အတိုဆုံး ကုဗနှင့် ၂၀.၅ပေ၏အရှည်ဆုံးကုဗရှိကြသည်။ သင်္ဘော၏အတိုင်းအတာမှာ သမ္မာကျမ်းစာရှိ ကမ္ဘာဦး ၆း ၁၅ တွင်ပေးထားသည်။ တိုသော ကုဗကိုအသုံးပြုသောအခါ သင်္ဘောသည် သုံးထပ်ဖြင့် ကြမ်းပြင်တွင် ၉၅၇၉ဝစတုရန်းပေ သို့မဟုတ် ၂.၂ ဧရိယာရှိလိမ့်မည်။ ရှည်သောကုဗကိုအသုံးပြုသောအခါ ကြမ်းပြင်တစ်ခုစီတွင် ၄၃၃၅ဝစတုရန်းပေရှိလိမ့်မည်။ ကြမ်းသုံးခုစလုံးသည် ၁၃၀၀၅ဝစတုရန်းပေ၊ အရွယ်အစားအား ဖြင့် သုံးဧရိယာရှိသည်။ အမြင့်မှာ ၅၁ပေရှိပြီး၊ ငါးထပ်အဆောက်အဦးထက်အနည်းငယ်နိမ့် သည်။ ယင်းမှာ ၂၂၁၀၈၅ဝကုဗပေ၊ နှစ်ဆယ့်နှစ်သိန်းကုဗပေကျော်ရှိသည်။ ၎င်းမှာ တိရိစ္ဆာန်ပေါင်း ၁၂၅၀၀ဝအတွက် လုံလောက်သောအရွယ်အစားဖြစ်ပေသည်။ ရုက္ခဗေဒပညာ ရှင်များက ထိုအရပ်တွင် ခြေလေးချောင်းသတ္တဝါ အတွဲ ၁၀ဝထက်မနည်း၊ ငှက်အမျိုးပေါင်း ၁၇ဝထက်မနည်းရှိမည်ဟုခန့်မှန်းကြသည်။ သင်္ဘောတစ်ခု၏ ၁၃၀၀၀ဝစတုရန်းပေကြမ်းပြင် သည် သင်္ဘောထဲသို့ဝင်သောမူလတိရိစ္ဆာန်များ အကြိမ်ပေါင်းများစွာနေထိုင်ရာဖြစ်နိူင်သည်။ Dr. Henry M. Morris က ဤသို့ဆိုထားသည်။
ကျွန်ုပ်တို့တွေ့ရှိခဲ့ပြီးသကဲ့သို့ သင်္ဘောသည် သိုးပေါင်း တစ်သိန်းနှစ် သောင်းငါးထောင်ခန့်သယ်ဆောင်နိူင်ပြီး တိရိစ္ဆာန်များ၏တည်နေရာမှာ ဖျမ်းမျှအကျယ်အဝန်းမှာ ထိုသိုးများတည်နေရာထက်နည်းမည်ဖြစ်၍ သင်္ဘောသယ်ဆောင်နိုင်စွမ်း၏ ၆၀ ရာခိုင်နှုန်းသာ တိရိစ္ဆာန်မျာအသုံးပြု မည်မှာ သိသာလှပေသည်။ ထို့ကြောင့် သင်္ဘော၏တိကျသောအရွယ် အစားမှာ တိရိစ္ဆာန်များအတွက်သော်လည်းကောင်း၊ တိရိစ္ဆာန်များအ တွက် စားစရာသော်လည်းကောင်း၊ နောဧနှင့်မိသားစုအသက်ရှင်ရန်လို အပ်မှုများသော်လည်းကောင်း၊ အခြားသောလိုအပ်ချက်များအတွက် သော်လည်းကောင်း သယ်ဆောင်နိူင်သည့်သဘောရှိပေသည်။( Henry. M. Morris, Ph.D., ကမ္ဘာဦးကျမ်းမှတ်တမ်း၊ Baker စာအုပ်တိုက်၊ ၁၉၈၆၊ စာ -၁၈၅ )
ရုပ်ရှင်ထဲရှိပုံဝတ္ထုတစ်ခုလုံးတွင် “နောဧ”သည် နတ်ဆိုးသဖွယ်ဖြစ်သော်လည်း သင်္ဘောကိုယ်တိုင်မှာ သမ္မာကျမ်းစာအရ အမှန်တကယ်ပင်ဖြစ်သည်။ ဒေါက်တာ Morris ဖော်ပြထားသကဲ့သို့ တရိစ္ဆာန်နှင့်ငှက်များ သည်သင်္ဘောဆီသို့လာခဲ့ကြသည်။ သူတို့သည် အလိုလိုသိသောစိတ်ဖြင့်လာခဲ့ကြပြီး ဆောင်းခိုသောအခြေအ နေတစ်ခုထဲသို့ လုံလုံခြုံခြုံ ကျကျနနရှိနေကြသည်။ ရုပ်ရှင်၏ထိုအပိုင်းသည် အလွန်တရာလှပကျော့ရှင်းပြီး သမ္မာကျမ်းစာအရလည်းမှန်ကန်ပေသည်။ သို့ရာတွင် ထိုရုပ်ရှင်ကို ဆက်ပြီးမကြည့်ပါနှင့်။ စာတန်၏လုပ်ဆောင် မှုသည် နာကျင်စေပြီး ရှုပ်ထွေးလှပေသည်။ သို့စေကာမူ၊ ဤကြီးမားသည့် သင်္ဘောသည် စိတ်ကူးယဉ်ကို ဖရိုဖရဲဖြစ်စေသည်။ အလွန်ကြီးမားသော သင်္ဘောနက်ကြီး၊ သုံးထပ်အမြင့်၊ လှိုင်း၏ဝေ့ဝဲမှုများ၊ ၉၀ ဒီဂရီ လှိုင်းထန်သည့်တိုင် မပျက်မစီးစေရန်ဘုရားသခင်ရည်ရွယ်ဖန်တီးထားသည်ကို ကြည့်၍ အသက်ရှူပျက်မတတ် ဖြစ်ခဲ့ရသည်။
ယင်းနှင့်ပါတ်သက်ပြီး နွေရာသီတိုင်းတွင် ဖြစ်နိူင်သည့်နေ့ရက်အနည်းငယ်တွင် အမေရိကန်ပြည် ထောင်စုရှိအာရရတ်တောင်တွင် သောင်းသောင်းသဲသဲရှာဖွေမှုများပြုလုပ်ခဲ့ကြသည်။ သူတို့သည် တစ်ခုသော နွေရာသီတွင် သင်္ဘော၏ကျောက်ဖြစ်ရုပ်ကြွင်းကိုတွေ့ရှိကြလိမ့်မည်။ သူတို့သည် တရားစီရင်ခြင်းအမှုကျ ရောက်တော်မမူမီကောင်စွာလုပ်ဆောင်နိူင်ကြလိမ့်မည်ဟု ကျွန်ုပ်ထင်မိသည်။ သို့ရာတွင် သုသေသနပညာရှင် များက ၎င်းကိုတွေ့သည်ဖြစ်စေ၊ မတွေ့သည်ဖြစ်စေ ရှေးဟောင်းအမေရိကန်လူကြီးများကမူ ကျွန်ုပ်၏ ကိုယ်လက်အားကစားရုံတွင်ရှိသည်ဟုဆိုကြသည်။ အသက်ကြီးသောသူတစ်ယောက်က သူ၏အဖိုးက ရေခဲငူစွန်းတွင် ၎င်း၏အပိုင်းအစတွေ့ရှိခဲ့ကြောင်းဆိုသည်။ ၎င်းက “သင်္ဘောသည် အနက်ရောင်ဖြစ်သည်၊ သူက အနက်ရောင်ဖြစ်မည်ဟု မထင်မှတ်သည်အကြောင်း”ဆိုပေသည်။
ကျွန်ုပ်မိသားစုနှင့် ကျွန်ုပ်သည် အင်္ဂလန်နိူင်ငံသို့ လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်းများစွာက သွားရောက်ခဲ့သည်။ ၎င်းမှာ ကျွန်ုပအဖိုး၏မွေးရပ်ဖြစ်၍ အလွန်ပင်ပျော်ရွှင်မိသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ဒေါင်ဝါရဲတိုက်သို့ သွားခဲ့ကြသည်။ သင်သည် “ဒေါင်ဝန်၏ ကျောက်ကမ်းပါးစောင်းဖြူများ”ကို ကြားဖူးနားဝရှိပေမည်။ သင်္ဘောပေါင်းများစွာတို့သည် အောက်ခြေရှိကမ်းဝါးများကို ရာစုပေါင်းများစွာတွင်တိုက်မိခဲ့ကြသည်။ သို့ရာတွင် ထိုနေရာသို့ရောက်ရှိသောအခါ ဒေါင်ဝန်ရဲတိုက်အကြောင်းကို သိပ်သတိမထားမိပေ။ သင်သည် ရဲတိုက်တစ်ခုကိုတွေ့မည်ဆိုလျှင် အားလုံးကိုတွေ့ခြင်းပင်ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်သည် ကျွန်ုပ်၏အာရုံကိုဖမ်းစားနိူင် သောအရာတစ်ခုကို အဝေမှတွေ့ရှိခဲ့ရသည်။ ယင်းမှာ အလွန်ပင်ကြီးမားလှပေသည်။ ရှေးဟောင်းဖြစ်သည်ကို သင်ပြောဆိုနိူင်ပေသည်။ ကြည့်ရှုရန်အနီးသို့ချဉ်းကပ်လာခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်မျက်စိကိုပင် မပိတ်နိူင်တော့ပေ။ ၎င်းသည် အမြင့် ပေရှစ်ဆယ်ဖြင့် ရပ်တည်နေသည့် တစ်ရာစုက တည်ရှိသည့်မီးပြတိုက်ဖြစ်သည်။ ၎င်းမှာ ညိုမည်းပြီးရှည်လျားသည့် မီးခိုးများကောင်းကင်သို့တက်သွားသည်။ ကျွန်ုပ်သည် အတွင်းပိုင်းသို့ဝင်၍ ကြည့်မိ သောအခါ အတွင်းပိုင်းနံရံများတွင် ရာစုပေါင်းများစွာ၏ အနက်ရောင် ကျပ်ခိုးကိုတွေ့ခဲ့ရသည်။ ဤသည်မှာ တမန်တော် ရှင်ယောဟန် ပတ်မုတ်ကျွန်းတွင် သက်ရှိထင်ရှားရှိစဉ်ခါ ရောမတို့တည်ဆောက်ထားသော အဆောက်အဦးဖြစ်သည်။ သူတို့သည် ဒေါင်ဝန်းအောက်ခြေတွင် ကျောက်ရှိသည်ဟူသောအရာကို အသိပေးရန်အတွက် အထဲတွင် သစ်ပင်များကို မီးရှို့ထားကြသည်။ ထိုရှေးဟောင်း မီးပြတိုက်ကို ကြည့်ရှုရင်း ကျွန်ုပ်ကျက်သည်းထလာသည်။ ကျွန်ုပ်စဉ်းစာမိသည်မှာ သင်္ဘောသည် မှောင်မိုက်ထဲတွင် သင်္ဘောဆီသို့လာ ပြီး ခဲဖြင့်ပစ်ပေါက်ကာ ပြက်ရယ်ပြုလျက် ထွက်ပြေးမည့် အကျင့်ပျက်ယောင်္ကျားလေးများမတိုင်မှီ သင်္ဘောသည် ဝိုးတိုးဝါးတားပေါ်လာပြီး ညမတိုင်မှီ ကြီးမားသည့်ရေသည် လာ၍ သူတို့အားလုံးကို လွင့်ပါသွားခဲ့ သည်။ ထိုနောက် လူတို့သည် ငိုကြွေးမြည်တမ်းကြလျက် လဲပြိုနေသောသစ်ကိုင်းများကို ကိုင်လျက်၊ တောင်ကုန်းကျောက်ဆောင်များပေါ်တက်လျက် ရှိကြသည်။ ဘုရားသခင်သည် နက်ရှိုင်းသောစမ်းရေပေါက် များကိုဖွင့်ပြီး ကောင်းကင်တံခါးပေါက်များကိုလည်း ဖွင့်တော်မူခဲ့သည်။
“မြေမျက်နှာပေါ်၌ရှိသောလူဖြစ်စေ၊ သားဖြစ်စေ၊ တွားတတ်သောအရာဖြစ်စေ၊ မိုဃ်း ကောင်းကင်ငှက်ဖြစ်စေ၊ အသက်ရှင်သောအရာရှိရှိသမျှတို့ကို၊ မြေကြီးပေါ်ကပယ်ရှင်း တော်မူ၍ ပျက်စီးကွယ်ပျောက်ခြင်းသို့ ရောက်ကြကုန်၏။ နောဧမှစ၍ နောဧနှင့်အတူ သင်္ဘောထဲ၌ရှိသောသူတို့သာ ကျန်ကြွင်းကြလေသည်။” (ကမ္ဘာဦး ၇း ၂၃ )
“နောဧမှစ၍ နောဧနှင့်အတူ သင်္ဘောထဲ၌ရှိသောသူတို့သာ ကျန်ကြွင်းကြလေသည်။” (ကမ္ဘာဦး ၇း၂၃ ) ထို့အပြင် သင်္ဘောသည် ခရစ်တော်ကို ပုံဆောင်ထားပေသည်။ သင်သည် ခရစ်တော်၌တည်နေလျှင် ကျရောက် လာမည့် တရားစီရင်ခြင်းအမှုမှ လွတ်မြောက်လိမ့်မည်။ ခရစ်တော်၌တည်နေတော်မမူလျှင် သေခြင်းမရှိသည့် ထာဝရမီးအိုင်ထဲသို့ကျရောက်ရပေမည်။ အဆုံးမရှိ၊ အအေးဒဏ်မရှိ၊ ထာဝရမဆုံးနိူင်သည့် လောင်မြိုက်ခြင်း ထဲတွင် ထပ်ခါထပ်ခါ ကျရောက်ပေလိမ့်မည်။
သင်မည်သို့လွတ်မြောက်နိူင်မည်နည်း။ သင်္ဘောဆီသို့လှမ်းလာခဲ့ပါ။ သင်္ဘောသည် ခရစ်တော်ကို ပုံဆောင်ထားပေသည်။ အနက်ရောင်ကတ္တရာစေးသည် ခရစ်တော်၏အသွေးတော်ကို ပုံဆောင်ထားပေသည်။ သင်္ဘောဆီသို့လာ၍ အထဲသို့ဝင်ပါ။ ထာဝရနောက်မကျခင် ခရစ်တော်ထံသို့ တိုးဝင်ချဉ်းကပ်ပါ။
သင်္ဘောကို ခြုံပုတ်ထဲမှာစောင်းငဲ့ကြည့်၍ရေလွှမ်းမိုးခြင်းမတိုင်မှီ ပြက်ရယ်ပြုသူများ၊ မြေကြီးပေါ်နှင့် ကောင်းကင်မှ စမ်းရေပေါက်များစီးကျလာသောအခါ သင်္ဘောဘေးများကို တစ်ဒိုင်းဒိုင်းဆောင့်သောသူများ၊ ကျွန်ုပ်တို့ကို နစ်မြှုပ်ခွင့်မပြုပါနှင့်ဟု အော်ဟစ်သူများ၊ ထာဝရမီးအိုင်ထဲတွင် ထာဝရကာလပတ်လုံး နာကျင်စွာ အော်ဟစ်နေသောသူများ၊ ထိုသို့သောသူများက သင်တို့အား “အကယ်၍ ဘုရားသခင်၏အမျက်တော်မှ လွတ် မြောက်တော်မူလျှင်၊ သခင်ဘုရား၏ပြင်းစွာသောအမျက်မှလွတ်မြောက်လျှင်ဟုဆိုလာလျှင် နောက်ပြန်လှည့်မ ကြည့်ပါနှင့်။ မည်သို့တိုးဝင်မည်ကို မစဉ်းစားဘဲ ဝင်လာပါ။ “သူ့အပေါ်ပုံအပ်ပါ။ လုံးလုံးလျားလျားပုံအပ်လိုက်ပါ။’ သူ့အပေါ်မိမိကိုယ်ကို လုံးဝအပ်နှံထားပါ။ “အခြားသူများကို မှီခိုအားထားတော်မမူပါနှင့်။” မိမိကိုယ်ကို သင်္ဘော တံခါးသို့တိုးဝှေ့လိုက်ပါ။ “သူ့အပေါ်ပုံအပ်ပါ။ လုံးလုံးလျားလျားပုံအပ်လိုက်ပါ။” အကြောင်းမူကား၊ ခရစ်တော် တပါးတည်းသာ ကျရောက်လာမည့်ဘေးဒဏ်မှ သင့်ကို ကယ်တင်ပြီး သင်၏အပြစ်များကို သူ၏သန့်ရှင်းပြီး ထာဝရအသွေးတော်အားဖြင့် ဆေးကြောတော်မူလိမ့်မည်။” အာမင်…..။
သင်၏သီချင်းစာရွက်ထဲမှာရှိသည့် နံပါတ် ၇ “ အပြစ်သားသင် ယခုလာပါ” သီချင်းကို မတ်တပ်ရပ် သီဆိုပါ။
ဆင်းရဲချို့တဲ့အားနည်းဒဏ်ရာ ဖျားနာအပြစ်သား ထံတော်ပါးသို့လာ၊
ခရစ်တော်သင့်အား သနားမေတ္တာ တန်ခိုးစွမ်းဖြင့် ကူညီမစကယ်တင်မည်။
(Joseph Hart, ၁၇၁၂-၁၇၆၈ သီကုံးထားသော “အပြစ်သားသင်ယခုလာပါ”)
ကျွန်ုပ်တို့ထံသို့လာ၍ သင့်ကိုကယ်တင်သောခရစ်တော်အကြောင်းကို ဆွေးနွေးပါ။ သင်၏ခုံကို ထားခဲ့ ပြီး နောက်ဘက်သွားလျှောက်လာပြီး ပရိသတ်ကြားနာရာအခန်းသို့လာခဲ့ပါ။ Dr. Cagan သည် ဆွေးနွေးနိူင် သည့်နေရာတွင် သင့်အားခေါ်ဆောင်လိမ့်မည်။ Dr. Chan တစ်ဦးတစ်ယောက်ပြောင်းလဲလာစေရန် ကျေးဇူးပြု၍ ဆိုတောင်းပေးပါ။ အာမင်……။
တရားဒေသနာမတိုင်မှီသမ္မာကျမ်းစာဖတ်ခြင်းကို သင်းအုပ်ကိုယ်တိုင်ဆောင်ရွက်သည်။ ၁ ကော ၁း၂၆-၃၁
တရာဒေသနာမတိုင်မှီ Mr. Benjamin Kincaid Griffith က ကျွန်ုပ်အလိုအပ်ဆုံးတေးသီချင်းဖြင် ႔ချီးမွမ်းသည်။ (တေးရေး-အမည်မသိ )
(ကမ္ဘာဦးကျမ်းနှင့်ပါတ်သက်၍ တရားဒေသနာ -၇၉)
(မဿဲ ၂၄း ၃၇-၃၉၊ ၂ ပေ ၂း ၅၊ ၁ ပေ ၃း ၂၀း၂၁၊ ဟေဗြဲ ၁၁း ၇၊ လုကာ
၂၄း၂၇၊ ၂ပေ ၃း၃၊ ယုဒ ၁၇-၁၉ )
၁။ ပထမအချက်- သင်္ဘောကို ဘုရားသခင်၊ ဧဖက် ၁း ၄၊ ဗျာဒိတ် ၁၃း ၈။
၂။ ဒုတိယအချက်- သင်္ဘောသည် အထဲတွင်ရှိသောသူများကိုသာကယ်တင်ရန်တည်ဆောက် ထားသည်။ ကမ္ဘာဦး ၅၀း ၂၆၊ ဝတ်ပြုရာ ၁၇း ၁၁၊
၃။ တတိယအချက်-သင်္ဘောမှာ ဘုရားသခင်၏အမျက်တော်ကို ကာကွယ်ပေးသည်။ တမန် ၄း၁၂၊ ယူဒ ၁၄-၁၅၊ ၂ပေ ၂း ၅၊ ကမ္ဘာဦး ၆း ၃
၄။ စတုတ္ထအချက်- သင်္ဘောထဲတွင် အားလုံးအတွက် အခန်းများရှိသည်။ ကမ္ဘာဦး ၇း ၂၃